Tags နှင့် Categories ကွာခြားမှု - PagePresso Myanmar WordPress Hosting
တခြားဘာမှထည့်သွင်းမတပ်ဆင်ရပဲ WordPress က Post များကို စုစည်းနေရာချရန် နည်းလမ်း ၂ ခုပေးထားပါတယ် ၊ Categories နဲ့ Tags တွေပါ။ အဲဒါတွေအကုန်လုံးကို နည်းပညာဝေါဟာရအနေနဲ့ taxonomies လို့ခေါ်ပါတယ်။
Taxonomy ဆိုတာပါလဲလို့ သင်မေးကောင်းမေးပါမယ်။ အကြောင်းအရာတွေကို ဖော်ပြဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ ပထဝီဆိုင်ရာ blog တစ်ခုမှာ ‘Country’ ဆိုတဲ့ taxonomy ရှိကောင်းရှိပါမယ် ၊ အဲဒါက နိုင်ငံအမည်တွေနဲ့ စုစည်းထားတာဖြစ်လို့နေပါမယ်။
Categories နဲ့ Tags ကွာခြားချက်ကဘာလဲ
အသေးစိတ် အနည်းငယ် ကွာခြားတာကလွဲရင် သူတို့က ကွာခြားတာကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Categories က အပေါ်အောက်အဆင့်လိုက်ဖော်ပြမှု ရှိပါတယ် ၊ ဒါကြောင့်မို့ မိဘနဲ့ ကလေးလိုမျိုး ဆက်နွယ်မှုရှိလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ Asia ဆိုပြီး Category တစ်ခုရှိမယ် ၊ အဲဒီ Asia အောက်မှာ Vietnam, Thailand, Laos ဆိုပြီး categories တွေရှိလို့ရပါတယ်။
Tags တွေက အပေါ်အောက်အဆင့် မရှိပါဘူး ၊ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ကြား ဆက်နွယ်မှုတွေ မရှိနိုင်ပါ။
အကယ်၍ ခင်ဗျားဟာ developer တစ်ယောက်ဆို ဒါက နက်နဲပြီး အရေးပါတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိနိုင်ပါတယ် ၊ သင်က developer မဟုတ်ဘူးဆို ဘာကြောင့် ဂရုစိုက်နေမှာလဲ။ ဘယ်ဟာကို သုံးသင့်သလဲ ? ၂ ခုစလုံးလား ? အဲဒါ မူတည်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ရုပ်ပုံအချို့ကို ကြည့်ကြရအောင်။
ဘယ်ဘက်မှာ ကျွန်တော်တို့ Categories တွေရှိပါတယ် ၊ အဲဒီမှာ ကုန်းမြေတိုက်ကြီးရဲ့ ကလေးတွေအဖြစ် နိုင်ငံများရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။ ညာဘက်မှာ ဒီအချက်အလက်ကိုပဲ Tags တွေအဖြစ်တွေ့ရပါမယ် ၊ UI (အသုံးပြုသူကြားခံနယ်တင်ပြမှု) က ကွာခြားသွားတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုက categories တွေ ဘယ်လိုထည့်လည်းဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါတယ်
ဒီဒုတိယဗီဒီယိုက tags တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါတယ်
Categories, Tags နှင့် URLs
အထက်ပါ ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုပါပဲ categories တွေက အပေါ်အောက်အဆင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ် ၊ ဒါတွေက URL ကိုလှည့်ပြောင်းမှုတွေကိုပေးလုပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံများ ဥပမာမှာ Laos category ရဲ့ URL က /category/asia/laos/ ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီး Laos tag အတွက်ဆိုရင် /tag/laos/ ဖြစ်ပါမယ်။
Tag URL က နောက်ထပ်အပိုင်းများဆက်မရှိနိင်ပါဘူး။ /tag/term/ ထက်ပိုပြီး မရှည်နိုင်ပါ ၊ category URL ကတော့ သင်စိတ်ရှိသလောက်ရှည်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ– Grand Rapids မြို့အတွက်ဆိုလျှင် /category/north-america/united-states/michigan/kent-county/grand-rapids/
URL တွေရဲ့ တန်ဖိုးရှိမှုက မတူညီတဲ့လူတွေနဲ့ ဝန်ဆောက်မှုပေးသူတွေပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဖိုးကွဲခြားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က URL ကနေပြီး Grand Rapids အကြောင်းသိရှိရမှုကို ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့် အခြားတယောက်ကတော့ အဆိုပါအချက်အလက်တွေကို ရိုက်ထည့်ရတာကို မုန်းတီးနေပါလိမ့်မယ်။
categories တွေ အဆင့်အဆင့်ရှိမှုရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုကတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင် archive စာမျက်နှာရှိတာပါ။ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းကိုပဲ အသုံးပြုရရင် /category/north-america/united-states/michigan/ ကို Michigan မှာရှိတဲ့ county တွေအားလုံးပြသလိမ့်မယ်လို့ မှန်းဆလို့ရပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ အဲဒီအကြောင်းအရာရှိလျှင် လွန်စွာကောင်းပါတယ် ၊ မရှိဘူးဆိုလျှင်တော့ country term ကို အဆင့်လိုက်ဖော်ပြမှုထဲကနေ ချန်လှပ်ထားဖို့ အကြုံပြုပါရစေ။
Categories နဲ့ Tags တို့ရဲ့ အကျဉ်းချုပ်
တကယ်တန်းတော့ Tag နဲ့ Category ကွာခြားချက်သိပ်တော့မရှိပါ ၊ လက်တွေလျှင်တော့ မတူညီသော လားရာဦးတည်ချက်များကို ရယူဆောင်ရွက်ရန် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဘယ်ဟာကို အသုံးပြု (နှစ်ခုလုံးဖြစ်စေ) ရန်မှာ သင်၏ လားရာဦးတည်ချက်များပေါ်မူတည်ပါသည်။ နည်းပညာကို သင့်ရဲ့ ဦးတည်ချက်များကို မကိုင်တွယ်ပါစေနှင့်။ ဦးတည်ချက်များက နည်းပညာကို ကိုင်တွယ်ပါစေ။